Wacom feno 35 taona ary mankalaza izany amin'ny fihenam-bidy lehibe | Famoronana an-tserasera
Wacom mankalaza ny faha-35 taonany amin'ny fihenam-bidy lehibe
Wacom no marika quintessential ho an'ny takelaka misy sary. Androany no nanambara ny faha-35 taonany haneho hevitra fa nandefa fihenam-bidy lehibe ho an'ireo rehetra izay mikasa ny hividy iray amin'ireo takelaka sary mahafinaritra.
Orinasa natsangana tamin'ny 1983 tany Japon ary androany mankalaza ny fitarihana 35 taona eo amin'ny tontolon'ny takelaka sary. Orinasa manokan-tena amin'ny ezaka ankehitriny hanampiana ny fampandrosoana ny karazana fampiharana 3D.
Miresaka momba ilay orinasa namorona takelaka penina nomerika voalohany izahay. Ary izany no antony hankalazana ny faha-35 taonany dia nanambara fihenam-bidy lehibe izy. Manomboka anio 1 Oktobra, ny Wacom Cintiq Pro 13 ho hita amin'ny vidiny 859,90 euro. Miresaka fihenam-bidy lehibe izahay raha mijanona amin'ny € 1099,90 ny vidiny voalohany.
A nampihena ny vidin'ny maodely Wacom MobileStudio Pro sasany. Inona no atao hoe solosaina ifandraisana izay ahafahantsika mihary hatramin'ny 300 euro amin'ny maodely isan-karazany. Solosaina noforonina mba hihoatra ny avo lenta takian'ny programa famolavolana sasantsasany nefa tsy dia mikorontana.
Efa volana vitsivitsy lasa izay izay i Wacom natolotra tao Madrid ny sasany amin'ireo vokatra vaovao. Ilay vaovao Wacom Intuos na Cinti Pro 24 dia ny sasany amin'ireo takelaka azonay notsapaina teo an-toerana. Andian-tsarimihetsika natokana ho an'ny famolavolana matihanina ary ahafahantsika mifanerasera amin'ny latabatra fiasa tsy misy hafa.
Wacom koa manantena ny hanambara tolotra mahaliana ho an'ny Wacom Intuos anao, iray hafa amin'ny vokariny voalohany izay ahitana rindrambaiko malaza amin'ny famerenana sary, sary hosodoko ary sary an-tsary; hanana fotoana foana ianao hanakaikezana rindrambaiko bebe kokoa toy ny Affinity.
Tsingerintaona faha-35 manontolo ho an'ny iray amin'ireo orinasa mpamorona misy akora lehibe kokoa ary misy ny tranonkala manokana, eo akaikin'ny Adobe sy ny maro hafa hatrany. Orinasa mamela antsika hanatsara ny fahaizantsika mana-kanto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Wacom mankalaza ny faha-35 taonany amin'ny fihenam-bidy lehibe
Adobe dia nanambara Acrobat DC vaovao hanoritana izay PDF
Mailchimp dia mavo amin'ny famolavolana endrika